Joogtaynta xarun raadiyo ayaa fure u ah ka hortagga xagjirnimada rabshadaha wata - Equal Access International
Joogtaynta xarun raadiyo ayaa fure u ah ka hortagga xag-jirnimada
Markii bulshooyinka laga dhigo xarunta qorshaynta iyo qaabeynta wax ka qabashada raadiyaha bulshada sida bulshada Karal ay ku yaalliin mashruucan, idaacadahaasi waxay u badan tahay inay guuleystaan ​​oo ay soo saaraan barnaamijyo runtii dhista adkeysiga.
Equal Access International (EAI) waxay hirgalisay barnaamij raadiyo oo guud oo ay ka mid yihiin dhisida idaacado cusub, hagaajinta xarumo burbursan, rakibida tabeello ku shaqeeya tamarta qorraxda, awooda dhismaha maareeyayaasha raadiyeyaasha iyo milkiilayaasha bulshada ee Chad si ay u baahiyaan barnaamijyo dhiirrigelinaya dulqaadka sida beddelka farriinta xagjirnimada. Tallaabada ugu horreysa ee mashruucu wuxuu ahaa in laga dhiso xarun raadiyo oo ku taal Karal, oo ah bulsho halista ugu jirta xagjirnimada rabshadda (VE).
Aabbahay wuxuu i siiyay talo yar oo ku saabsan sariirta dhimashadiisa oo aad ugu eg waxqabad, wuxuuna yidhi: Xaaladdan faqriga iyo faquuqiddu waa mid aan la iska horkeeni karin. Tag oo noqo wakiil bedel u noqda beesheena, noqo hogaamiye isbadal sameeya, una doodo magaca Budumas. ” Adam Tchari
Khatarta ugu weyn ee idaacadaha bulshada waa lahaansho la'aan. Hadeysan bulshooyinka ku mashquulsan abuurka, horumarka, iyo dhisida awooda xarumaha dhamaan heerarka, hogaamiyaasha jaaliyadaha iyo daneeyeyaasha muhiimka ah lagama yaabo inay kusii nagaadaan caqabadaha jira. Haddii, dhinaca kale, beeluhu lagu meeleeyo xarunta qorshaynta iyo qaabeynta wax ka qabashada raadiyaha bulshada, sida bulshada Karal oo keliya, maahan in idaacadahaasi u badan tahay inay ku guuleystaan ​​oo ay sii ahaadaan wixii ka dambeeya dhamaadka maalgelinta, barnaamijka barnaamijka Soosaarid iyo baahin ayaa ka turjumeysa baahiyaha dhageystayaasha, mudnaanaha, iyo xaqiiqooyinka.
Marka la eego guusha dhismaha hore iyo bulshada xamaasadda iyo dhiirigelinta ay ku shaqeeyaan saldhiga, munaarad labaad ayaa laga dhisay Massenya kadib markii ay dhacday xagaagii 2016. Tallaabada ugu dambeysa ee qorshaha joogtayntu waxay ahayd in lagu rakibo dhalooyinka qorraxda ee Karal iyo Bol. . Tani waxay xaqiijisay in dadka ku nool bulshooyinkaan, iyo hareeraha 100 km, ay heli doonaan dhisme nabadeed oo muhiim ah, adkeysiga, iyo u dulqaadashada barnaamijyada lagu bixiyo luqadaha maxalliga ah yaraynta u nuglaanta u nuglaanta kooxaha VE. EAI waxay sidoo kale tababaro siisay shaqaalaha raadiyaha oo ay ku jiraan, kaliya maahan xirfadaha farsamada, laakiin dhisida karti waarta oo loogu talagalay maareeyayaasha loo xilsaaray inay wakiil ka noqdaan saldhigyada Radio Al Houda Gnere (ee Guereda), Radio Darbadja (Amtiman), Radio Meguedem (gudaha Bousso, Raadiyo Mourgoudida (oo ku taal Massenya), iyo Radio Al Hadda (oo ku yaal Karal).
Waxaa jirtay (walina tahay) baahi dhab ah oo loo qabo in bulshooyinka reer Chad ay helaan macluumaad kahortaga xagjirnimada rabshadaha wata (CVE) si ay saameyn ugu yeeshaan dhaqamada bulshada. Ku habboonaanta idaacadaha cusub ee Karal iyo xarunta Bol oo leh solar system si ay u kaydiso una soo saarto tamarta waxay si weyn uga faa'iideysaa bulshada iyo kuwa ku nool jasiiradaha ku xeeran maxaa yeelay waxay hadda awoodaan inay dhageystaan ​​qeybaha la xiriira CVE iyo wararka kale ee muhiimka asal ahaan ma aysan heli karin ama way kala go'een. Abuuritaanka raadiyaha bulshada ee gobollada halista ugu jira iyo saameynta ku yeelatay VE wuxuu bixiyaa barxad is weydaarsi macluumaad iyo wadahadal si loo yareeyo xiisadaha ka dhex jira bulshooyinka halista ugu badan leh. Sidoo kale, saldhigyada bulshada ee Chad ayaa ah goobo loogu talagalay hoggaamiyeyaasha dhexdhexaadka ah (bulshada, dhaqanka, iyo diinta) inay si toos ah ula macaamilaan dadweynaha arrimaha mudnaanta leh. Halkii ay ahaan lahayd darawalnimada xagjirnimada iyo xagjirnimada, haddii si furan oo kalsooni leh looga wada hadlo, caqabadaha bulshada iyo arrimaha, sida faquuqida, waxay u adeegeen marinno laga soo galo doodaha ballaadhan ee fahamka xubnaha bulshada. Raadiyaha galaangalka leh ee meel walba la heli karo ayaa micnaheedu yahay in muwaadiniinta dhammaan dakhliga iyo xaaladda dhaqan-dhaqaale lagu dari karo wadahadalka.
Nagala soo qaybgal raadinta dariiqooyin hal abuur leh oo lagu taageerayo jaaliyadaha in lagu wareejiyo nabadda iyo codad dhexdhexaad ah marka laga hadlayo xagjirnimada